China TPU Hot inyauka inonamira firimu yevekunze zvipfeko vagadziri uye vanotengesa | H&H
Ukobvu / mm 0.05 / 0.06 / 0.08 / 0.1 / 0.12 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.35
Upamhi / m / 1m / 1.4m / 1.5m seyakagadzirwa
Kunyorera nzvimbo 85-125 ℃
Unyanzvi hwekushandisa muchina wekupisa-kupisa: 150-160 ℃ 10s 0.4Mpa
HD371B inogadzirwa neTPU zvinhu neimwe shanduko uye fomular. Inowanzo shandiswa isinga pinde mvura-nhatu-bhanhire, zvipfeko zvemukati zvisina musono, muhomwe isina musono, isina zipi isina mvura, tambo isina mvura, isina musono zvinhu, zvipfeko zvinoshanda zvakawanda, zvinhu zvekuratidzira uye mamwe minda. Iko kusanganisa kugadziriswa kwemachira akasununguka akasiyanasiyana senge nylon jira uye jira re lycra, uye munda unobatanidza wePVC, dehwe nezvimwe zvinhu. Senge rekunze zvipfeko placket / zipi / homwe chivharo / ngowani yekuwedzera / yakashongedzwa chiratidzo.
1.Kunyorova kwekunzwa ruoko: kana yaiswa pamucheka lamination, chigadzirwa chichava neyakareruka uye yakasununguka kupfeka.
2.Mushonga-wekuwachisa: Inogona kuramba kanokwana kagumi kugezwa-mvura.
5. Nzvimbo yakanyunguduka yepamusoro: Inosangana nezvikumbiro zvekupisa kupisa.
TPU Hot yakanyunguduka inonamira firimu inowanzoshandiswa pazvipfeko zvekunze senge placket, cuff laMination uye zipper seam sealing iyo inozivikanwa kutambirwa nevatengi nekuda kweayo akapfava uye akasununguka akapfeka kunzwa kana kwekuyemura kukoshesa. Ichowo chiitiko mune ramangwana kuti kushandisa inopisa nyungudika namira firimu yekunamatira musono panzvimbo yechinyakare kusona.
HD371B TPU Hot yakanyunguduka namira firimu anoshandiswa nevakawanda pane nezvakarukwa bheji uye jira chitaridzi izvo zvakakurumbira kugamuchirwa nehembe manfacturers nekuda kwezvakatipoteredza zvine hushamwari mhando uye kugadzirisa zvirinani. Ichi chikumbiro chakazara mumusika.
Pashure: Kupisa kunyauka kunamatira firimu yezvipfeko zvekunze
Zvadaro: Yakapisa yakanyunguduka tepi yekunamatira yemukati isina kupfeka
PES inopisa inopisa yakanyunguduka inonamira firimu
EVA Hot inyauka inonamira firimu yeshangu
PES inopisa inopisa inonamira firimu yealuminium pani